Fanarenana ny SIRAMA :: Misisika ho eo akaikin-dRajoelina ny ekipan’ireo minisitra noesorina • AoRaha
Fanarenana ny SIRAMA Misisika ho eo akaikin-dRajoelina ny ekipan’ireo minisitra noesorina
Miandrandra ny fiverenan’ny fihodinan’ny orinasa mpamokatra siramamy ao Brickaville tokoa ireo mpo-nina any an-toerana, taorian’ ny fahaverezana asa tamin’ny olona efajato eo ho eo. Misy kosa ny ahiahy izay naposak’izy ireo tamin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry nandritra ny fandalovan’ity farany tany an-toerena, ny talata maraina teo, ka nampanantenainy an’io fisokafan’ny orinasa io indray.
Maty momoka foana hatreto, hoy ny solontenan’ireo mpiasa, ny filazana ny famerenana ny fanodinana ny famokarana siramamy, tany Brickaville, ary ny fisian’ireo mpiara-miasa akaiky tamin’ireo minisitra teo aloha, izay hita fa tsy nahavaha olana, no tena mampanahy azy ireo raha mbola tafiditra sy mikatroka amin’ny tetikasa fanarenana ny orinasa Sirama Bricka-ville ireo karazan’olona ireo.
“Isan’ny antony tsy fahombiazana ireo minisitra vitsivitsy teo aloha sy ny ekipany, izay nitondra loko politika samihafa”, hoy ny iray tamin’ireo solontenan’ ny mpiasa nahazo anjara fitenenena. Voatonona manokana aza ny tompon’andraikitra ambony iray ao amina minisitera, izay niara-niasa tamin’ireo minisitra efatra nifandimby ka notondroin’ireo solontenan’ny mpiasa molotra mihitsy satria mbola misahana io andraikitra io hatrany, hatramin’izao.
Ny orinasa Sasm, ankehitriny, no nomen’ny fitondram-panjakana ny adidy sy andraikitra amin’ny fampihodinana indray ny Sirama. Efa nampiditra fitaovana fito ambin’ny folo kaontenera ny orinasa Sams, izay voafidy handray ny orinasa Sirama Brickaville teo aloha nandritra ny fandalovan’ny Filoha tany an-toerana.
Fikasihan-tanana any an-tsekoly :: Hiakatra Fitsarana ilay mpampianatra nandratra ankizy
Fitaterana amin’ny lamasinina :: Miandalana ny firosoana amin’ ny fanarenana ireo lalamby